Sii-hayaha ku-xigeenka wakiilka Mareykanka ee QM oo ka hadashay go’aankii Baarlamaanka ee kalsooni kala noqoshada Xasan Kheyre – Kalfadhi
Sii-hayaha ku-xigeenka wakiilka joogtada Mareykanka ee QM, Cherith Norman Chalet oo maanta khudbad ka jeedineysay kulanka Golaha Amaanka ee QM, kaas oo looga hadlayay arrimaha dalka Soomaaliya ayaa sheegtay kalsooni kala noqoshadii Baarlamaanka ee Ra’iisul Wasaarihii hore iyo go’aankii madaxweynaha in ay keliya sii kordhisay xiisado siyaasadeed.
Ambassador Cherith Norman Chalet, ayaa caddeysay in ay ka walaacsanyihiin ficilkaasi oo kale in uu hoosta ka xariiqayo geedi socodka wadahadalka iyo gorgortanka ee u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowladaha xubinta ka ah federaalka iyo daneeyayaasha kale ee muhiimka ah.
Waxaa ay xustay in si xooggan ay ugu dhiiri gelinayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah inay kawada shaqeyaan doorashada soo socota.
“Doorashooyinku waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo la isku halleyn karo, waqtigii loo baahnaa ay qabsoomaan, xasilloonaan leh, wax ku oolna ah, oo ku dhisan is-faham”.
Waxaan soo dhoweyneynaa wada hadalada ka socda Dhuusamareb waxaanan ku dhiirigelineynaa dhinacyada inay heshiis ka gaaraan nooca doorasho taas oo shuruudaheeda ay noqon karaan in la fuliyo horraanta 2021, ayey tiri.
Xildhibaan Maryan Haaruun “Haddii daqliga uu kordhay maxaa diiday in shaqaalle cusub la qoro?”